Bluestacks vs Nox App Player - Ny fampitahana farany (2020) - Softwares
Mbola, mieritreritra izay Android Emulator no tsara indrindra eo amin'ny Bluestacks sy Nox App Player?Izahay dia nampita anao sy namaly an'ity fanontaniana ity amin'ity lahatsoratra ity. Nampitahainay ny Bluestacks vs Nox App Player amin'ny faritra samihafa toa ny endri-javatra, ny interface-ny mpampiasa, ny takian'ny rafitra ary ny sehatra hafa.
Nanambara ny mpandresy anay ihany koa izahay amin'ny farany ka manome ity lahatsoratra ity hamaky feno hahafantarana hoe iza no Android Emulator tsara indrindra eo amin'ny Bluestacks vs Nox App Player.
Bluestacks vs Nox App Player - Fampitahana amin'ny antsipiriany
Bluestacks dia Android Emulator izay novolavola tamin'ny 2011 avy amin'ny Bluestacks.Inc. Nanomboka teo dia nipoitra teo amin'ny tsena manerantany ny Bluestacks noho ny fiasa ampitaina. Bluestacks dia nampihatra ny teknolojia fampidirany LayerCake algorithm izay mampiasa fitaovana PC handefasana tontolo sy fampiharana Android. Ny Bluestacks dia mamela anao hitantana tontolo Android amin'ny PC izay mandeha tsara sy haingana kokoa noho ny telefaona finday. Ny Bluestacks dia manana tobim-pahalalana maherin'ny 210 tapitrisa ary manisa.
Nox App Player: Topimaso
Nox App Player dia Android Emulator izay novolavolain'ny ekipa mpamorona ao Hong Kong tamin'ny taona 2015. Na dia natomboka taorian'ny efa-taona Bluestacks aza ny Nox App Player, dia nahomby tamin'ny fahazoana mpampiasa 150 tapitrisa ny mpamorona Nox. izao tontolo izao. Ny fiasan'ny Nox App Player dia mitovy amin'ny Bluestacks izay mihazakazaka fampiharana Android, saingy na izany aza, ny Nox App Player dia manana anton-javatra lehibe samihafa izay mitazona azy ho fifaninanana amin'ny Bluestacks.
Bluestacks: Endri-javatra lehibe sy tombontsoa
Bluestack no Android Emulator be za-draharaha indrindra ary mbola mitombo sy mampiditra endri-javatra vaovao izay afaka manatsara ny traikefan'ireo mpampiasa. Ireto misy ampahany amin'ny Bluestacks:
Sarintany fanalahidy: Ny Bluestacks dia mamela anao hanao sarintany ny lakilanao araka ny safidinao lehibe. Azonao atao ny manitsy ny fatorana lakile izay ampiasainao amin'ny lalao sy manao ny tsara indrindra. Azonao atao ihany koa ny mampiditra fidirana hilalao amin'ny totozy, izay no zava-dehibe indrindra raha milalao lalao FPS na lalao mpitifitra olona voalohany ianao.
Multi-Ohatra:Ity endri-javatra ity dia hahafahanao milalao lalao marobe miaraka miaraka amin'ny efijery misaraka. Ity fampiasa ity dia hamela anao hilalao lalao mitovy amin'ny kaonty samihafa amin'ny varavarankely iray.
MultiSync:Ity dia singa iray izay natombok'i Bluestacks tato ho ato. Ity fampiasa ity dia hahafahanao mampifangaro ny fihetsiketsehana rehetra amin'ny efijery sy milalao ny lalao tadiavinao.
Macros:Ity dia fisehoan-javatra iray ahafahanao misambotra firaketana an-tsary, manangona azy ireo ary mijery azy ireo isaky ny tianao. Hamela anao haka sary an-tsary ihany koa ary hamonjy azy ireo.
FPS avo: Ity dia hanaparitaka ny kalitaon'ny horonan-tsary sy ny lalao amin'ny efijeryo. Raha manohana FPS avo lenta ny lalao, dia hamokatra taha tahaka izany ny Bluestacks izay hiseho milamina sy mahafinaritra amin'ny maso tokoa.
Nox App Player Features sy tombontsoa lehibe
Na dia maivana kokoa noho ny Bluestacks aza ny Nox App Player dia mbola manana endrika mitovy aminy ihany. Nox App Player maivana dia mitaky toerana kely kokoa amin'ny fahatsiarovan'ny solosaina ary mamonjy toerana fanampiny ho anao. Andeha hojerentsika izao ny toetoetran'ny Nox App Player:
Keymapping:Nox App Player dia mamela anao hamatotra ny kitendry sy mpibaiko arakaraka ny safidinao. Azonao atao koa ny mampiasa ny totozy.
Multi-Ohatra:Ity fampiasa ity dia hahafahanao mankafy lalao maro amin'ny fotoana iray manokana. Tsy misy tsy ampy ny fialamboly. Saingy tsy ho hitanao eto ny Multi-Instance tahaka ny ahatongavanao ao amin'ny Bluestacks.
Mpamaky Macro:Io dia hahafahanao mirakitra ny gameplays anao na amin'ny besinimaro handrakofana ny efijeryo ary hahafahanao maka pikantsary amin'ny efijeryo ary afaka manampy script izay tanterahinao amin'ny lalaoo. Ny script dia ahafahanao manao asa manokana izay nampiana ho an'ny script.
Bluestacks: Interface an'ny mpampiasa
Ny Bluestacks dia manana mpampiasa-interface mahitsy sy mamaritra. Ny zavatra rehetra ilainao dia eo amin'ny lafiny ankavanan'ny efijery anao.Azonao atao ny manova ny kisary mba hahafantarana hoe inona ilay kisary ary inona no ataony. Ary raha tianao ny lohahevitra maizina, dia ho tia Bluestacks ianao satria ny fampiharana manontolo dia miorina amin'ny lohahevitra maizina fotsiny. Ity misy topimaso momba ny mpampiasa-Bluestacks.
Nox App Player: Interface an'ny mpampiasa
Nox App Player dia manana ny interface-ny mpampiasa mitovy amin'ny takelaka Android. Ny fampiharana dia voalamina eo amin'ny faran'ny efijery misy anao, ary ny fikirakira ny Nox App Player dia eo amin'ny ilany havia amin'ny efijeryo. Nox App Player koa dia manana lohahevitra manga mainty izay mahasarika ny endrika amin'ny ankapobeny.
Ny fahombiazan'ny programa dia tsaraina amin'ny isa naotiny izay midika hoe ohatrinona ny fandaniana ny CPU sy ny GPU.Voalaza fa ny kinova farany Bluestacks dia 6x haingana kokoa noho ilay teo aloha. Na dia fanambarana goavambe aza ity dia tsy namela ny tenany mihitsy ny Bluestacks. Nandalo fitsapana vitsivitsy izahay, ary ny valiny azonay dia.
Izahay dia nilalao Call of Duty: Mobile amin'ny Bluestacks nandritra ny adiny roa ary ny valiny azonay dia. Milamina tsara ny Bluestacks, ary tsy nisy ny lozam-pifamoivoizana na ny FPS izay tsikaritray. Mihazakazaka am-pilaminana ny lalao, ary tsy mbola nahita ny Bluestacks mihinana CPU kely kokoa izahay. Amin'ny ankapobeny amin'ny lafiny fampisehoana Bluestacks dia nilalao tsara.
Nox App Player: Fampisehoana
Na dia emulator maivana aza ny Nox App Player, betsaka ny olona manamaivana izany. Nox App Player koa dia nandalo ny fitsapana fari-pahaizana tamin'ny alàlan'ny fahombiazany tamin'ny Call of Duty: Finday sy lalao hafa miaraka, ary gaga izahay tamin'ny valiny.
Nahazo Nox App Player koa izahay nanao tsara tamin'ny 0 FPS nilatsaka, ary tsy nisy nahatsikaritra fianjerana. Raha ampitahaina amin'ny Bluestacks, Nox App Player dia nanolotra fifaninanana loha-loha amin'ny fampisehoana ihany koa.
Bluestacks: Fepetra takiana amin'ny rafitra
Ny kinova Bluestacks vaovao indrindra dia afaka mandeha amin'ny Windows sy Mac. Ho an'ny varavarankely, na inona na inona manomboka amin'ny Windows & hatramin'ny farany dia mandeha tsara avokoa. Raha manana processeur tsara kokoa ianao dia mety miasa ny Bluestacks fa ho an'ny fototra, azonao atao ny mampiasa AMD rehetra ary miasa ny processeur Intel. Raha ny fitadidiana dia tokony hanana RAM 2GB farafaharatsiny ianao, ary 10GB farafahakeliny ho an'ny habaka kapila maimaim-poana ary na inona na inona ambonin'ireo fetra ireo dia mety hanana fahombiazana tsara kokoa. Bluestacks dia miasa raha tsy manana GPU ianao fa manana GPU raha mikasa ny hilalao.
Ho an'ny Mac, raha manana OS Sierra ianao ary ambonin'izany dia handeha tsara ny Bluestacks. Raha ny momba ny processeur raha manana Intel ianao na manana processeur dual-core AMD, ny Bluestacks dia hanohana izany, ary ho fahatsiarovana, na inona na inona ambonin'ny 4GB RAM sy 10GB disk space malalaka dia hiasa.
Nox App Player: Fepetra takiana amin'ny rafitra
Nox App Player dia programa maivana mandresy an'ity sokajy ity satria afaka mandeha amin'ny milina anaovanao azy izy. Ho an'i Windows, na inona na inona ambonin'ny Windows XP sy Vista dia manohana ny Bluestancks, ary ho an'ny fahatsiarovana dia mitaky 1,5GB RAM sy habaka disk 3 GB fotsiny no ilaina. Ny fepetra takiana amin'ny rafitra dia kely kokoa ho an'ny Bluestacks ary raha mieritreritra ianao fa ireto voalaza etsy ambony ireto no fototry ny Nox App Player dia eritrereto ny fomba fiasan'ny Nox App Player raha toa ka havaozina.
Nox App Player dia natsangana ho an'ny mpampiasa Windows ary navoaka herintaona taorian'ny nananganana azy ho an'ny windows. Raha mihazakazaka Nox App Player dia tokony manana Mac OS 10.9 na avo kokoa ianao.
Famaranana: Iza amin'ireo no tokony hofidinao?
Ankehitriny rehefa avy nandalo ity lahatsoratra ity izahay dia antenaina fa nanapa-kevitra ianao izao ary ianao koa no mpandresy, dia izayBluestacks.Saingy, misy ihany ny faritra sasany izay nanome fifaninanana henjana ho an'ny Bluestacks i Nox App Player, ary izany dia eo amin'ny sehatry ny fampisehoana sy ny fampifandraisan'ny mpampiasa.
Na dia vaovao aza ny Nox App Player dia mbola programa mandroroka ary mbola mitombo.Hitanay fa mifandraika tanteraka amin'ny fampiasana ny antony Bluestacks ny maha-azo itokiana azy sy ny endriny matanjaka. Gamer malaza marobe no mampiasa Bluestacks hilalao lalao Android amin'ny PC-ny satria fantany ny Buestacks sy ny endriny.
Raha manana fangatahana na sosokevitra ianao, azafady apetraho ao amin'ny faritra misy hevitra etsy ambany. Hiezaka hamaly ny fanontanianao rehetra haingana araka izay tratra izahay.
IOS Emulator tsara indrindra ho an'ny PC
Ahoana ny fomba hamahana ireo olana tsy miasa ao amin'ny Hulu?
ny fomba hamafana ny kaonty reddit
Mora ampiasaina imovie
ny fomba fampidinana rindrambaiko Alexa amin'ny solosaina finday
ny fomba hijerena sarimihetsika famoahana vaovao an-tserasera maimaim-poana
horonantsary amazon prime vs netflix 2016
tranonkala hijerena sarimihetsika maimaim-poana nefa tsy misoratra anarana
finday xbox finday mpamorona kaody mivantana